Home for Rent / Sale in Yangon, Myanmar - YgnHome
Mayangone (မရမ်းကုန်း) South Okkalapa (တောင်ဥက္ကလာပ) Thingangyun (သင်္ဃန်းကျွန်း) Hlaing (လှိုင်) North Dagon (ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း) Tarmwe (တာမွေ) Sanchaung (စမ်းချောင်း) Insein (အင်းစိန်) Kamaryut (ကမာရွတ်) Yankin (ရန်ကင်း) Thaketa (သာကေတ) North Okkalapa (မြောက်ဥက္ကလာပ) Bahan (ဗဟန်း) South Dagon (ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း) Thanlyin (သန်လျင်) Kyee Myin Daing (ကြည့်မြင်တိုင်) East Dagon (ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း) Mingalardon (မင်္ဂလာဒုံ) Hlaing Tharyar (လှိုင်သာယာ) Mingalar Taung Nyunt (မင်္ဂလာတောင်ညွန့်) Pazundaung (ပုဇွန်တောင်) Shwe Pyi Thar (ရွှေပြည်သာ) KyaukTaDa (ကျောက်တံတား) မှော်ဘီ Botahtaung (ဗိုလ်တထောင်) Ahlone (အလုံ) လှည်းကူး Lanmadaw (လမ်းမတော်) Dagon Seikkan (ဒဂုံဆိပ်ကမ်း) Dawbon (ဒေါပုံ) Dagon (ဒဂုံ) Pabedan (ပန်းဘဲတန်း) ထန်းတပင် Dala (ဒလ) တိုက်ကြီး တွံတေး Latha (လသာ) Kyauk Tan (‌ကျောက်တန်း) ကွန်းခြံကုန်း ဆိပ်ကြီးခနောင်တို ဒါးပိန်
ရောင်း/ငှား ရောင်း (25) ငှား (29)
Dagon Seikkan (ဒဂုံဆိပ်ကမ်း)
East Dagon (ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း)
Hlaing Tharyar (လှိုင်သာယာ)
Kyauk Tan (‌ကျောက်တန်း)
Kyee Myin Daing (ကြည့်မြင်တိုင်)
Mingalar Taung Nyunt (မင်္ဂလာတောင်ညွန့်)
North Dagon (ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း)
North Okkalapa (မြောက်ဥက္ကလာပ)
Shwe Pyi Thar (ရွှေပြည်သာ)
South Dagon (ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း)
South Okkalapa (တောင်ဥက္ကလာပ)
Copyright © 2016 - 2020 YgnHome.com. All rights reserved.
သိချင်တာများမေးရန် နှိပ်ပါ ✅
YgnHome မှကြိုဆိုပါတယ် သိချင်တာများကို ဒီမှာမေးနိုင်ပါတယ် ချက်ခြင်းအကြောင်းပြန်ပေးပါ့မယ်...ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Typically replies inaone minute. (ချက်ခြင်းဖြေပေးပါတယ်)